Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး China Manufacturers & Suppliers & Factory
Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး - တရုတ်ထံမှထုတ်လုပ်သူ, စက်ရုံ, ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း
( 24 များအတွက်စုစုပေါင်း Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး ထုတ်ကုန်များ)
အဲယားကွန်းများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး
အဲယားကွန်းများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး ဓာတုအမည်: Perfluorohexene စံပြဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာဓာတု inertia နှင့်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်-controlled အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်;0င်များ၏သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေရှိသည် ODP တန်ဖိုးနှင့်အလွန်အမင်းနိမ့် GWP တန်ဖိုးကို ဖလိုရင်းအရည်ပျော်ပစ္စည်း,...
ရေခဲသေတ္တာများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး ဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာမြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းအင်ချွေတာရေး၏ဝိသေသလက္ခဏာများရှိပါတယ်။ အရာ မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ ငါ t ကိုလေအေးစက်၏အပူ-မျိုးဆက်ကို C ooling နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: *...
Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအရည်အအေးခံခြင်း ဒေတာစင်တာဆာဗာများအတွက်အသုံးပြုသောနစ်မြုပ်အဆင့်ပြောင်းလဲမှုကိုအရည်အအေး, လေအေးပေးစက်အအေးမလိုအပ်ပါဘူး အရာသည်အလွန်ကွန်ပျူတာအခန်း၏ပါဝါစားသုံးမှုလျော့နည်းစေသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာ inertia...
အရည်လေတပ် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာထကျ သာ. ကောငျးအေး
ကြွေထည်များအတွက် anti-ရေ Fluorocarbon Coating
ကြွေထည်များအတွက် anti-ရေ Fluorocarbon Coating [ဆန့်ကျင်လက်ဗွေဖြေရှင်းချက်သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း Non-hydrophilic နှင့်...
ကြွေထည်မြေထည်အဘို့အပွန်းပဲ့ Resistance Fluorocarbon Coating
ကြွေထည်မြေထည်အဘို့အပွန်းပဲ့ Resistance Fluorocarbon Coating [ကြွေ Coating သတ်မှတ်ချက်] ပုံပန်းသဏ္ဍာန်: အရောင်မဲ့သို့မဟုတ်အဝါရောင်ပွင့်လင်းအရည် AF အဆိုပါ specia lly ဖွဲ့စည်းပုံမှာ fluorosilicon နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ fluorocarbon အပေါ်ယံပိုင်းတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည် ဗဓေလသစ်။ ဆန့်ကျင်လက်ဗွေအပေါ်ယံပိုင်း Non-hydrophilic...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား ထုပ်ပိုး, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, သိုလှောင်မှု: သံမဏိသို့မဟုတ်ပလပ်စတစ်ဗုံအတွက်ထုပ်ပိုး 1. အသားတင်အလေးချိန် 50Kg, 10Kg, စည်နှုန်း 1Kg ။ 2. အဆိုပါပလပ်စတစ်-စီတန်းစည်ပေါ့ပေါ့ loaded နှင့်တုန်ခါမှုနှင့်တိုက်မှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့မြေပေါ်သို့ချရမည်ဖြစ်သည်။...
လီသီယမ်ဘက်ထရီ Powered ကားများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ fluorine တို့ဓာတုဗေဒ set ကို 21 ရာစုအတွက်ပိုပြီးအရေးပါလာအဖြစ် fluorine တို့ဓာတုဗေဒ, တစ်ဦးဘုနျးကွီးသောအလားအလာကိုရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာကျယ်ပြန့်အထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ကားများ၏ဘက်ထရီ၏အအေးပေးစနစ်, အီလက်ထရွန်နစ်ထုတ်ကုန်များ၏အပူစနစ်အသုံးပြုသည်။...
ရေခဲသေတ္တာများအတွက်အလတ်စားရေခဲသေတ္တာအေး Fluorocarbon ဓာတုအမည်: Perfluorohexene Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ ငါလေအေးပေးစက်၏အပူ-မျိုးဆက်ကို C ooling T ။ စံပြဓာတုအာဂွန်,...
ရေခဲသေတ္တာများအတွက် non ယားယံ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ
ရေခဲသေတ္တာများအတွက် non ယားယံ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ဒါဟာအရောင်, ပွင့်လင်း, အနိမ့်ထဲမှာပါတဲ့, Non-မီးလောင်လွယ်ခြင်း, အလွန်အမင်းလုံခြုံအရည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသန့်ရှင်းရေးအရည်ပျော်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ယခင် Ethan ဖလိုရင်းဖြေရှင်းချက်ကဲ့သို့တူညီသောအရည်ပျော်ပစ္စည်းပါ။...
အဲယားကွန်းအဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်ရေး Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ
အဲယားကွန်းအဘို့အမြင့်တည်ငြိမ်ရေး Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ ဒါဟာလေအေးပေးစက်၏အပူ-General ၏အေး။ စံပြဓာတုအာဂွန်, ဒီကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * စံပြဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာဓာတု inertia နှင့်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်-controlled...
အဲယားကွန်းများအတွက်0င် ODP Fluorocarbon အေးအလတ်စား
အဲယားကွန်းများအတွက်0င် ODP Fluorocarbon အေးအလတ်စား လေအေးပေးစက်၏အပူ-General ၏အရည်အအေးခံခြင်းအေးမြင့်သော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ် fluorocarbon ။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: ကိုယ့်အဲယားကွန်း inertia သည်ရေခဲသေတ္တာရှိတယ်ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်းနှင့်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်-controlled...
အဲယားကွန်းများအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene * အကောင်းစံပြဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာဓာတု inertia နှင့်အတူအဲယားကွန်းသည်ရေခဲသေတ္တာနှင့်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်-controlled အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်; * အလတ်အနိမ့်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်အအေးအဆိုပါ Fluorocarbon အလွန်အလယ်အလတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။...
နျူကလီးယားပါဝါအဘို့အအလတ်စားရေခဲသေတ္တာအေး Fluorocarbon ဤသည်ဖလိုရင်းအော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်များ nontoxic ဖြစ်ပါသည်,0င်များ၏အန္တရာယ်, Non-နာကျင်ကျိန်းစပ်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေ, ODP တန်ဖိုးကိုရှိသည်နှင့်အလွန်နိမ့် GWP တန်ဖိုးကို...
နျူကလီးယားပါဝါအဘို့အ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ 47 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် TUWF-47, 110 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် TUWF-110, 165 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက် TUWF-160 ဓာတုအမည်: Perfluorohexene Fluorocarbon အေးအလတ်စားစီးရီး, အရာ Perfluorinated အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric...
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ကောင်းသောလျှပ်စစ်လျှပ်ကာ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ, 40KV အထက်အလွန်မြင့်မားသောပြိုကွဲဗို့2doesn`t အောက်က dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ဒေတာစင်တာကိုပလီကေးရှင်းကိုဆုံးရှုံးဒေတာလုပ် အီလက်ထရွန်ဖလိုရိုက်ဖြေရှင်းချက် စီးရီး,...
အကြီးစားကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ROOM တွင်အိမ်ရှင်များအတွက် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ ဓာတုအမည်: Perfluorohexene ဖလိုရင်းရေခဲသေတ္တာစီးရီး, အရာ Nontoxic အရည်တ္ထုများဖြစ်ကြသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ ဒီကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ငါ t...
ဒေတာများကို Server ကိုများအတွက်အလတ်စားရေခဲသေတ္တာအေး Fluorocarbon
Container DATA Centre တည်ဆောက်မည်ဆာဗာများအတွက်အလတ်စားရေခဲသေတ္တာအေး Fluorocarbon အရည်အအေးခံစနစ်က: ဒေတာစင်တာကိုအအေးတစ်ဦးကအသစ်ပိုမိုထိရောက်သောနည်းလမ်းတစ်ခု Fluorocarbon စီးရီးဖြစ်သောအရည်ပျော်ပစ္စည်းအရည်တ္ထုများ, fluorinated နေကြတယ် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည်။ ဒါဟာမှာ Data Center ကို Server ကိုအေး။ 0...
အင်ဗာများအတွက်အလယ်အလတ်ရေခဲသေတ္တာအအေး Fluorocarbon ဓာတုအမည်: Perfluorohexene သ-47 အဆိုပါအင်ဗာတာများအပူလွန်ကျူးမှုစနစ်ဒီဇိုင်းတစ်ဦးကလက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်အသစ်နည်းလမ်း အေးအပေါ်ယံပိုင်း၏အသေးစိတျ: * ဖလိုရင်းအရည်, nontoxic အန္တရာယ်ကင်း non-နာကျင်ကျိန်းစပ်; * ရေခဲသေတ္တာအရည်စံပြရှိ ဓာတု inertia...
ဂီယာအုံများအတွက်အလတ်စားစီးရီးအေး Fluorocarbon ဂီယာ drives တွေကိုများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား-စျေးနှုန်းချောဆီကိုမှပြောင်းလဲပစ်ရန်အများအပြားစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်တွေရှိပါတယ်။ အပူတစ်စက်မှုရှုထောင့်ကနေဝေဖန်အချက်တခုဖြစ်ပါသည်။ အပူယင်းဂီယာအုံများတွင်တက်သကဲ့သို့, ထဲမှာပါတဲ့ thins ။ အဆိုပါထဲမှာပါတဲ့ Thin...
ဂီယာအုံများအတွက်အရည် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ
ဂီယာအုံများအတွက်အရည် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာစံပြဓာတု inertia ရှိသည်နှင့်ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်-controlled အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်; * ဓာတု Coating အနိမ့်ကြွက်ကြွက်ဆူသောအချက်သည်အလွန်အလယ်အလတ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။...
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား
လေရဟတ်တာဘိုင် Generator ကိုများအတွက် Fluorocarbon အေးအလတ်စား အေးအလတ်စားကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးသောအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အပူလွန်ကျူးအခါသမယတွင်အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဖလိုရိုက်ဓာတုအမည်, Perfluorohexene ဖြစ်ပါသည် မြင့်မားသော dielectric စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိသည့်အရည်ဓာတု။ အဆိုပါ dielectric အပေါ်ယံပိုင်း၏ဝိသေသ: * Fluorocarbon...
Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအအေးခံခြင်း အရည် Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာ ရေခဲသေတ္တာအရည် အသုံးပြုခြင်း Fluorocarbon ရေခဲသေတ္တာအေး အလတ်စားရေခဲသေတ္တာအေး